Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » I-Boeing ixazulula amacala omphakathi angu-MAX kodwa icala le-FlyersRights liyaqhubeka
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
I-Boeing ixazulula amacala omphakathi angu-MAX kodwa icala le-FlyersRights liyaqhubeka.
I-FlyersRights.org iyaqhubeka nokumangalela kwayo, isekelwa ochwepheshe abazimele bezokuphepha kwezindiza.
Umgomo wecala le-FlyersRights uwukuphoqa i-FAA ukuthi ikhiphe imininingwane yokulungisa engu-MAX nokuhlolwa kwendiza.
Icala le-FlyersRights.org ngokumelene ne-Boeing kuzoba ngenye yezindlela ezimbalwa zokuthola iqiniso nokuziphendulela ngokuphahlazeka kwe-737 MAX.
I-Boeing iwaxazulule amacala ayo omphakathi nayo yonke imindeni ngaphandle kwemibili yezisulu zengozi yendiza i-Ethiopian Airlines Flight 302 Boeing 737 MAX ngoMashi 10, 2019. Ukuphahlazeka kwe-ET302, kanye nengozi yeLion Air Flight 610, ezinyangeni ezine nje ngaphambili. , kwathatha ukuphila kwabantu abangu-357.
UkuBhebhana, nokho, iyaqhubeka necala layo, elisekelwa ochwepheshe abazimele bezokuphepha, ukuze kuphoqelelwe i-FAA ukuthi ikhiphe imininingwane yokulungisa i-MAX nokuhlolwa kwendiza. I-FAA, ngo BoeingIsiyalo sika-Boeing, igcine imfihlo yonke imininingwane ehlobene ne-MAX ngaphansi kwesimangalo sezimfihlo zohwebo, ngaphandle kwezithembiso ze-Boeing kanye ne-FAA zokubonisa izinto obala okugcwele.
Boeing isivumile isibopho somonakalo odalwe ukuphahlazeka kwe-Ethiopian Airlines Flight 302, futhi imindeni yezisulu ingase ilandele umonakalo oyisinxephezelo e-Illinois. Kodwa-ke, isivumelwano sivimba amademeshe okujezisa, umonakalo obungajezisa i-Boeing ngokuziphatha okubi futhi obungavimba u-Boeing nabanye ekuziphatheni okunjalo esikhathini esizayo.
“Lesi sinqumo sisho ukuthi UkuBhebhana ukumangalelwa Boeing kuzoba enye yezindlela ezimbalwa zokuzuza iqiniso nokuziphendulela ngokuphahlazeka kwe-737 MAX,” kuphawula u-Paul Hudson, uMongameli we-FlyersRights.org. "Ngokugwema ukutholakala nokufaka amacala kulawa macala omphakathi ngaphezu kokugwema ukuqulwa kwamacala obugebengu kanye nezinhlawulo ezinkulu ezivumelwaneni zayo nohulumeni wobumbano, i-Boeing kuze kube manje iphunyuke ngempama esihlakaleni ehlobene nobukhulu benkampani kanye nobukhulu benkampani. ngobubi bayo.”
Ngokuphawulekayo, i-Boeing inethemba lokuthi izokwazi ukugwema ukuchithwa kwe-CEO uDavid Calhoun, owayeyi-CEO uDennis Muilenburg, nabanye abasebenzi. U-Boeing wavuma isivumelwano sokushushiswa esihlehlisiwe noMnyango Wezobulungiswa ngoJanuwari 2021, wakhokha inhlawulo eyizigidi ezingama- $ 244 kodwa akavumanga cala.